Shina : Manetsika ny reny hitaky ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2010 21:54 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Italiano, Français, македонски, srpski, Español, বাংলা, English
Nametraka fikambanana antsoina hoe Neny Mpitsara (Mama Jury) ny Fikambanan'ny media an-tserasera any Beijing tamin'ny 19 Janoary 2010 hanivana ny vaovao mamoha fady sy vetaveta an-tserasera. Ny tatitra nataon'ny Southern Weekend moa no nametraka fa avy tany amin'ny firenena tandrefana no niaingan'ny hevitra hikambanan'ny reny “hiaro” ny ankizy tsy hahita vetaveta. Nefa ny fikambanan'ny reny Shinoa dia natsangan'ny sampan'ny Antoko komonista shinoa fa tsy mba najoron'ny fikambanana mpiaro ny olompirenena (sivika) tsy miankina tahaka izay misy any amin'ny tany tandrefana.
Manontany ny maha-ara-dalàna ny “fomba fiaraha-miasan'ny fikambanan'ny reny sy ny fitondrana” i Yang Heng Jun:
Voalohany, iza no nanome fahefana anareo “hanome naoty” izay hitanao ao amin'ny aterineto? Faharoa, eritreretinareo ve fa izay tsy antonona ny ankizy dia tokony kosehina? ka tokony hakatona izany ireny vohikala ireny? Tokony horarana amin'ny Shinoa iray manontolo ve izy ireny? Na dia arovan'ny “Lalampanorenantsika” sy tsy voararan'ny “Lalàna ady heloka bevava” aza izay votoatiny?
Andao hapetratsika ny tsangakevitra hoe “ny mahasoa ny ankizy no voalohan-daharana”. Raha mandray izany tsangakevitra izany ianao, maninona raha ampiharina amin'ny fiainana andavanandro izay iainan'ny ankizy izany?
Azonao raràna ny ankizy tsy hiserasera (aterineto), fa tsy azonao averina ho lasa akaninjaza na disneyland eo ambanin'ny tsangakevitra hoe “ny mahasoa ny ankizy no voalohan-daharana” kosa ny aterineto… mifanohitra amin'ny Lalampanorenana izany ary mifanohitra amin'ny mahaolona. Raha averinao “hifanaraka” ho an'ny ankizy ny aterineto, dia tsy hihalehibe ny ankizy, ary hivarina ho “ankizy” ny olondehibe….
Hu Yong niditra lalina kokoa tamin'ny hevitr'i Yang:
Mivandravandra fa mitady “hitantana” ny firenena iray manontolo ka mametraka ny tenany ho “raiamandreny” ny fitondrana… Nanjaka tokoa ny fanentanana hanohitra ny “zava-poana” ka maro ny vohikala niharan'ny fijaliana tanaty ririnina mamirifiry. Fa mety hahatsaratsara endrika ny fanentanana ny fisian'ny reny mitondra ny fanevan'ny “fiarovana ny ankizy” .
Maro amin'ny olona no miahiahy fa hiaka politika fihatsarambelatsihy hametrahana ny sivana amin'ny aterineto “ny mahasoa ny ankizy no voalohandaharana”. Tsy mba eny amin'ny ankolafin'ny ray aman-dreny sy ny zanakamanko ny fitondrana rehefa miatrika adihevitra tena izy, tahaka ny raharahan'ny ronono misy poizina melamine. Navoitran'i Chang Ping fa nosamborina tamin'ny volana novambra 2009 ilay ray , Zhao Lianhai, izay nanao fanadihadiana momba ity ronono voapoizina melamine ity. Tsapan'i Chang Ping indray hoe nahoana moa ireto reny manohana ny sivana izay mitabataba ho tia ny zanany ireto no tsy hita nanohana an'i Zhao? Ary ny toa tena fanesoana, ilay filohan'ny filankevi-pitantanana manara-maso ny dion'ny sakafo (AQSIQ), Li Changchun, izay nametra-pialana noho ny raharaha ronono voapoizina iny dia notendrena ho filohalefitry ny ekipa miasa hanohitra ny vaovam-“betaveta” sy tsy manara-dalàna (an-tserasera).
Niara-nampiaka-peo tamin'i Chang Ping i Laotuzaizi ary nanolo-kevitra fa tokony hisokatra ho amin'ny fitarihan'ny “reny” ny governemanta:
Maninona moa ny Neny Mpitsara (Mama Jury) raha ovaina hoe Neny ho amin'ny Fitondrana ny governemanta (Mama for Government Monitor). Andao ny reny no halefa any amin'ny minisiteran'ny fahasalamana, AQSIQ, ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny varotra sy ny orinasa. Avelao izy ireo no ho filohan'ny departemanta, ny birao tahaka ny itarihan'izy ireo ny mpiserasera. Tokony hahomby mihitsy izany. Aza matahotra, fa tsy hifaninana aminareo aho. Avelao ny reny ho eo ambany fanaraha-mason'ny firaisan'ny Fikambanam-behivavy manerana ny firenena. Afaka manofa mpiasa vavy na vady any amin'ny ekipan'ny Reny Mpitarika ianao. Ho voavaha ny ankamaroan'ny olana amin'ny tsy fananan'asa. Sady mora izany nomora tanterahina noho ny fananganana Vaomieram-panjakana momba ny Fiarovana ara-tsakafo. Samy manana ny fahavalony voajanahary avokoa ny zava-miaina rehetra. Mazava loatra fa ny mampatahotra ny mpiasam-panjakana ambony Shinoa dia ny vehivavy tsotra.